Zimbabwe police stop protest march by civil servants | News
Published at 22:11 on 06 November 2019 Updated: 22:20
Police block a group of government workers protesting against the rise in cost of living in Harare, Wednesday, Nov, 6, 2019. Zimbabwe police Wednesday blocked government workers from marching to protest for better salaries, a day after dozens of public hospital doctors were fired for striking for more pay. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A group of government workers react with police while protesting in Harare, Wednesday, Nov, 6, 2019. Zimbabwe police Wednesday blocked government workers from marching to protest for better salaries, a day after dozens of public hospital doctors were fired for striking for more pay. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A government worker reacts with police while protesting in Harare, Wednesday, Nov, 6, 2019. Zimbabwe police Wednesday blocked government workers from marching to protest for better salaries, a day after dozens of public hospital doctors were fired for striking for more pay. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A group of government workers hold placards while protesting in Harare, Wednesday, Nov, 6, 2019. Zimbabwe police Wednesday blocked government workers from marching to protest for better salaries, a day after dozens of public hospital doctors were fired for striking for more pay. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
A group of government workers react with a police officer while protesting in Harare, Wednesday, Nov, 6, 2019. Zimbabwe police Wednesday blocked government workers from marching to protest for better salaries, a day after dozens of public hospital doctors were fired for striking for more pay. (AP PhotoTsvangirayi Mukwazhi)
France dazzles against Ireland but England wins 6 Natio ...
France secured a 35-27 bonus-point ...
Burton wins 2nd straight to disrupt Xfinity Series play ...
Harrison Burton played the spoiler ...